Meghan Markle ရဲ့ Fashion style တွေကို ပုံစံတူဝတ်ဆင်ပြတဲ့ Body Positive Blogger – FemaleWear.net
Meghan Markle ရဲ့ Fashion style တွေကို ပုံစံတူဝတ်ဆင်ပြတဲ့ Body Positive Blogger
မကြာခင် ဗြိတိသျှတော်ဝင်မင်းသား ဟယ်ရီနဲ့ မင်္ဂလာဆောင်တော့မယ့် Hollywood မင်းသမီး Meghan Markle ရဲ့ Fashion တွေနဲ့ ပုံစံတူအဝတ်စားတွေ ဝတ်ဆင်ပြနေတဲ့ အမျိုးသမီးကတော့ Katie Sturino ဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတော့ Meghan Markle လို ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားမဟုတ်ဘဲ plus-size ဖြစ်နေတဲ့ Body-Positive Blogger တစ်ဦးပါ။ သူမရဲ့ instagram မှာတော့ Meghan Markle ရဲ့ fashion ပုံစံတွေတင်မကဘဲ သူမရဲ့ idol တွေလို့ သတ်မှတ်လို့ရတဲ့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ fashion အတိုင်း Fashion မျိုးစုံကို ဝတ်ဆင်ပြထားတဲ့ ပုံတွေကိုပါ မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
သူမအနေနဲ့ အခုလို ပုံစံတူတွေ လိုက်ဝတ်ပြနေတာဟာ သူမရဲ့ idol တွေရဲ့ Fashion ကို inspired ယူတာဖြစ်နိုင်သလို body plus-size အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ အဝတ်စားတွေကို ပိန်တဲ့သူတွေမှ စတိုင်ကျကျ ဝတ်ဆင်နိုင်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲ plus-size အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့လည်း ဖက်ရှင်ကျကျဝတ်ဆင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ သဘောမျိုးနဲ့ ဝတ်ဆင်ပြထားတာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ သူမဟာ Instagram Follower 154K ဖြစ်ပါတယ်။ Plus-size အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ တခါတရံအဝတ်စား ဒီဇိုင်းတွေ၊ style တွေ ရွေးချရခက်နေရင်တော့ Katie Sturino ရဲ့ instagram ကို follow လုပ်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်နော်။
Getting harder to #supersizethelook Meghan Markle’s looks bc she is limiting appearances before the ??, but this green dress/blazer combo wasano ?’er. Another no brainer? Going to Corgi Court tomorrow at Herald Square in NYC to see the corgis dressed as the entire royal family to celebrate the premiere of the Harry + Meghan movie on @lifetimetv which I WILL BE WATCHING ON SUNDAY! The Corgi court is from 12-4pm tom, FYI ????#ad #CorgiWedding #aroyalromance
I can’t stop!! I have Royal Fever!! ?????#supersizethelook